Fahefan’​ny Jiosy sy Tanimboly Namafazana Tsimparifary | Fantatrao Ve?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mongol Mooré Myama Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Tena nisy ve izany hoe olona namafy tsimparifary teny an-tanimbarin’olona izany?
Anisan’ireo asa soratra be dia be miresaka tsipiriany momba ny raharaham-pitsarana fahiny izy io
HOY i Jesosy ao amin’ny Matio 13:24-26: “Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray namafy voa tsara teny an-tanimbariny. Raha mbola natory ny olona, dia tonga ny fahavalony namafy tsimparifary teo amin’ny vary, dia lasa. Rehefa naniry ny vary ka niteraka, dia nipoitra koa ny tsimparifary.” Maro ny mpanoratra mieritreritra hoe mba tena nisy olona nahavita an’izany tokoa ve. Hita amin’ny asa soratra momba ny lalàna romanina fahiny hoe tena nisy izany.
Misy diksionera momba ny Baiboly milaza hoe: ‘Araka ny lalàna romanina, dia manao heloka bevava izay mamafy tsimparifary eny amin’ny tanimbolin’olona mba hamaliana faty. Mateti-pitranga izany matoa nanaovana lalàna.’ Namintina ny lalàna romanina sy ny asa soratry ny mpahay lalàna (taona 100-250 tany ho any) i Justinien mpanjaka romanina. Nataony boky (Digeste, frantsay) ilay izy tamin’ny taona 533. Naveriny ao, ohatra, ny zavatra nolazain’i Ulpien, mpahay lalàna, momba ny zava-nitranga iray tamin’ny andron’i Celsus, manam-pahefana romanina tamin’ny taonjato faharoa. Nisy olona namafy tsimparifary teny amin’ny tanimbolin’olona, hono, ka tsy namokatra ilay tanimboly. Resahin’ilay boky hoe inona no navelan’ny lalàna nataon’ny tompon’ilay tanimboly, mba hahazoana onitra na vola tamin’ilay namafy tsimparifary.
Hita amin’izany hoe nisy nahavanon-doza hoatr’izany tokoa ny olona tany amin’ny faritra nanjakan’ny Romanina fahiny. Avy tamin’ny zavatra tena nisy àry ilay fanoharan’i Jesosy.
Inona avy no navelan’ny Fanjakana Romanina niandraiketan’ny manam-pahefana jiosy tany Jodia, tamin’ny taonjato voalohany?
NY ROMANINA no nifehy an’i Jodia tamin’ny taonjato voalohany. Governora iray miaraka amin’ny miaramilany no solontenan’ny fitondrana romanina. Ny nanangona hetra ho an’i Roma sy ny nitandro filaminana no tena nataony. Niezaka nampitsahatra an’izay fanao mifanohitra amin’ny lalàna koa anefa ny Romanina, sady nanasazy an’izay olona nahatonga korontana. Ny manam-pahefana jiosy teo an-toerana kosa matetika no navelan’izy ireo hiandraikitra ny tao Jodia tamin’ny andavanandro.
Fivorian’ny Fitsarana Avo Jiosy
Ny Fitsarana Avo Jiosy no fitsarana tampony ho an’ny vahoaka jiosy. Izy io koa no niandraikitra ny resaka lalàna jiosy. Nisy fitsarana ambany kokoa anefa eran’i Jodia. Azo antoka fa izy ireny no nitsara ny ankamaroan’ny olona niakatra fitsarana, na ady madio ilay izy na ady heloka. Tsy niditra tamin’izany ny Romanina. Izy ireo ihany anefa matetika no namono ny mpanao heloka bevava, fa tsy navelany hanao an’izany ny fitsarana jiosy. I Stefana ihany no tsy hoatr’izany, fa ny Fitsarana Avo Jiosy no nitsara azy sy nitora-bato azy.​—Asa. 6:8-15; 7:54-60.
Betsaka àry ny zavatra nananan’ny Fitsarana Avo Jiosy fahefana. Nilaza anefa ny manam-pahaizana atao hoe Emil Schürer fa “voafetra ihany ny fahefan’izy ireo. Afaka nisalovana mantsy ny manam-pahefana romanina na rahoviana na rahoviana, ary tsy nangataka hevitra tamin’ny Fitsarana Avo Jiosy izy ireo. Nanao an’izany izy ireo rehefa nisy zavatra nahiahiny hoe hisy vokany ratsy amin’ny fitondrana.” Izany, ohatra, no nitranga tamin’ny andron’ilay mpitari-tafika atao hoe Klaodio Lysia. Nasainy nosamborina ny apostoly Paoly, izay olom-pirenena romanina.—Asa. 23:26-30.
Fantatrao Ve?​—Oktobra 2016
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Oktobra 2016